विस्थापित नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी - bampijhyala.com
Home > समाचार > Covid -19 > विस्थापित नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी
११ असार २०७८, शुक्रबार २०:४३ bampijhyala
११ असार, बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । नेपाल सरकारले बाढी पहिरो प्रभावित नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउने तयारी गर्न लागेको छ । जसमा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्ला लगायतका पालिकाका विस्थापित नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी थालिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले बताउनु भएको छ ।
बाढी पहिरो जाने जिल्ला सिन्धुपाल्चोक र मनाङलगायत केही पालिकाका नागरिकहरु बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका छन् र वहाँहरु घरबारबिहीन भएका छन् । विद्यालय लगायतका ठाउँमा समूहमा बस्न बाध्य छन् । जसले गर्दा कोरोनाको जोखिममा पर्ने सम्भावना धेरै छ । त्यसैले उहाँहरुका लागि खोप दिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
विस्थापित नागरिकहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको भन्दै डा गौतमले यकिन संख्या आएपछि १८ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिने मिति तय हुने बताए ।
खोपको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त भन्ने जिज्ञासमा डा. गौतमले भने, ‘भेरोसेल खोपको केही मात्रा स्टक हुन्छ कि भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । उक्त खोपको मात्रा बचेमा विस्थापित नागरिकलाई लगाउने भन्ने हो ।
असार १४ पछि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा ल्याउन छलफल सकारात्मक
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ११ असार २०७८, शुक्रबार २०:४३
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स ११ असार २०७८, शुक्रबार २०:४३
लघुकथा–पढ्ने रहर ११ असार २०७८, शुक्रबार २०:४३
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल ११ असार २०७८, शुक्रबार २०:४३
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला ११ असार २०७८, शुक्रबार २०:४३